Adobe Illustrator CS5 नि:शुल्क डाउनलोड लिङ्कहरू
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Adobe Illustrator CS5 नि:शुल्क डाउनलोड
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-05-05, Nepali Blog
Adobe Illustrator CS5 नि: शुल्क डाउनलोड लिङ्कको बारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छ? पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् र किन्नुहोस् Illustrator आधिकारिक स्रोतबाट? यस पोष्टमा, तपाईंले Adobe Illustrator CS5 को पूर्ण संस्करण डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका पत्ता लगाउनुहुनेछ बिना एक डलर तिर्न। नि:शुल्क विकल्पहरू पत्ता लगाउन पढ्नुहोस् र यस सफ्टवेयरको संस्करणसँग सम्बन्धित प्रायः सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुहोस्।
Adobe Illustrator CS5 लाभहरू
रचनात्मक सुविधाहरू र शक्तिशाली उपकरणहरूको एक विस्तृत संख्या
परिप्रेक्ष्य मा कलाकृति कोर्न को लागी क्षमता
विशेषताहरू सम्पादन गर्न उपस्थिति प्यानल
Adobe CS एकीकरण
के आधिकारिक वेबसाइटबाट Adobe Illustrator CS5 परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
होइन, किनकि Adobe ले CS5 संस्करणलाई समर्थन गर्दैन। Adobe Illustrator सबैभन्दा नयाँ र एक मात्र संस्करण हो जुन तपाईंले आधिकारिक वेबसाइटबाट परीक्षण अवधिको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
Adobe Illustrator को पूर्ण संस्करणको लागत कति छ?
Adobe ले Illustrator CS5 को लागि कुनै समर्थन प्रदान गर्दैन। यद्यपि, तपाईं आधिकारिक वेबसाइटमा गएर प्रति महिना $२०.९९ मा Illustrator 2022 v24.1.2.402 को नवीनतम संस्करण किन्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले सदस्यता खरीद गरेपछि, तपाईंले सफ्टवेयरको सबै सम्भावनाहरू पूर्ण रूपमा अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
के Illustrator को परीक्षण संस्करणले Windows र Mac OS मा काम गर्छ?
हो, Illustrator परीक्षण दुबै Windows र Mac OS सँग उपयुक्त छ।
म कहिले सम्म परीक्षण प्रयोग गर्न सक्छु?
एक पटक तपाईंले जाँच गर्नुहोस् Adobe Illustrator नि:शुल्क परीक्षण, तपाईं यसलाई7दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षण अवधि समाप्त भएपछि, तपाईंले पहिले रद्द नगरेसम्म यो स्वचालित रूपमा क्रिएटिभ क्लाउड सदस्यतामा रूपान्तरण हुनेछ।
के नि:शुल्क परीक्षण Illustrator को पूर्ण संस्करण हो?
हो, यसमा Illustrator को नयाँ संस्करणका सबै प्रकार्यहरू र अद्यावधिकहरू छन्।
Adobe Illustrator CS5: पायरेटेड संस्करण
2010 मा जारी गरिँदै, Adobe Illustrator CS5 सफ्टवेयरको पुरानो संस्करण हो। तसर्थ, यो आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न असम्भव छ। तपाईंले Adobe Illustrator CS5 नि:शुल्क डाउनलोड पूर्ण संस्करण लिङ्कहरू प्रस्ताव गर्ने धेरै पाइरेटेड प्लेटफर्महरू भेट्न सक्नुहुन्छ।
जतिसुकै लोभलाग्दो लागे पनि, तपाईंले यी लिङ्कहरू मध्ये एउटालाई पछ्याउने र प्रोग्राम डाउनलोड गर्ने बित्तिकै, तपाईंले गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। तल, मैले सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दा तपाईंले सामना गर्न सक्ने सबैभन्दा सामान्य परिणामहरू वर्णन गरेको छु।
सफ्टवेयर पाइरेसी गैरकानूनी छ र यसले सिविल र आपराधिक दायित्व दुवै निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाइँ ह्याक गरिएका उत्पादनहरू प्रयोग वा वितरण गर्नुहुन्छ भने Adobe Illustrator keygen, यसले आर्थिक जरिवाना र जेल सजाय पनि हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा, प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको दण्ड प्रति अपराध $250,000 सम्मको जरिवाना र/वा पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ।
2. उच्च संक्रमण जोखिम
को बहुमत Adobe Illustrator Torrent लिङ्कहरूले धेरै भाइरस र मालवेयर समावेश गर्दछ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो पीसीमा ह्याक गरिएको सफ्टवेयर स्थापना गरेपछि, त्यहाँ भाइरसबाट संक्रमित हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसले विभिन्न प्रणाली समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै कष्टप्रद पप-अपहरू र क्र्यासहरू।
यसबाहेक, ह्याकरहरूले बिलिङ डाटा वा पासवर्डहरू जस्ता तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न सक्छन्। निस्सन्देह, तपाईं को मद्दत संग संक्रमण उपचार गर्न सक्नुहुन्छ उत्तम नि: शुल्क एन्टिभाइरस सफ्टवेयर तर किन जोखिम ?
3. अद्यावधिकहरूको अभाव
सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरू प्रायः त्रुटिहरू समाधान गर्न र तपाईंको कार्यक्रमको स्थिरता सुधार गर्न महत्वपूर्ण प्याचहरू समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ एक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ Adobe Illustrator crack संस्करण, तपाईंले कुनै पनि अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन। त्यसोभए, यदि तपाइँ Adobe Illustrator CS5 डाउनलोड लिङ्क पछ्याउनुहोस् र कार्यक्रम स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ नवीनतम अपडेटको साथ आउने नयाँ उपयोगी सुविधाहरूबाट लाभ उठाउन सक्षम हुनुहुने छैन।
4. प्रदर्शन मुद्दाहरू
सुरक्षा प्वालहरू बाहेक, क्र्याक प्रोग्रामहरू जस्तै प्रयोग गर्दै Adobe Illustrator पोर्टेबल पछि लाग्ने, त्रुटिहरू र असंगतिहरू जस्ता अप्रिय परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ। साथै, तपाईं आफ्नो काम गुमाउन र उत्पादकता कम गर्न सक्नुहुन्छ। निरन्तर बगहरू र ग्लिचहरूले क्र्यासहरू निम्त्याउन सक्छ वा कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न नसकिने बनाउन सक्छ।
मेरो जाँच गर्नुहोस् Adobe Illustrator समीक्षा पूरा गर्नुहोस्।
नि:शुल्क Adobe Illustrator CS5 विकल्पहरू
जो Illustrator CS5 डाउनलोड लिङ्क प्रयोग गर्न चाहँदैनन् र सफ्टवेयरको पूर्ण संस्करणको लागि भुक्तान गर्न तयार छैनन्, उनीहरूले समान प्रकार्यताका साथ निःशुल्क कार्यक्रमहरूको अधिकतम फाइदा लिन सक्छन्। कार्यात्मकताको हिसाबले Illustrator भन्दा कम नपुगेका ५ सबैभन्दा पूर्ण-विशेष विकल्पहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
सजिलो सिक्ने वक्र
उपकरणहरूको एक विस्तृत संख्या
केही उन्नत सुविधाहरू समावेश गर्दैन
Vectr दुबै नौसिखिया SVG प्रयोगकर्ताहरू र पेशेवरहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। सफा र अव्यवस्थित इन्टरफेसको साथ, तपाईं आफ्नो कामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि कार्यक्रममा केही उपकरणहरू छैनन्।
Vectr ले सुविधाहरूको आधारभूत सेट समावेश गर्दछ, जस्तै पाठ, आकारहरू, छायाहरू, किनाराहरू, तहहरू, पृष्ठभूमिहरू र थप। सीधा नेभिगेसन र सजिलो सिकाइ कर्भको साथ, तपाईंका परियोजनाहरूमा काम गर्ने हावा हुनेछ। यो क्रस-प्लेटफर्म सफ्टवेयर Mac OS, Windows, Chrome OS र Linux लगायत विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमहरूसँग उपयुक्त छ। यदि तपाइँ Adobe उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ खरीद गर्न आवश्यक छ Adobe Illustrator को लागि उत्कृष्ट ल्यापटप, जबकि Vectr बरु संसाधन सहनशील छ।
व्यावसायिक डिजाइन उपकरणहरूको एक विस्तृत श्रृंखला
कमजोर कम्प्युटरहरूमा राम्रोसँग काम गर्दछ
पाठ उपकरणहरू सुधार गर्न आवश्यक छ
Inkscape Adobe Illustrator CS5 डाउनलोडको लागि सबैभन्दा तुलनात्मक विकल्पहरू मध्ये एक हो। यो SVG फाइल ढाँचा भित्र काम गर्नेहरूको लागि उपयुक्त छ। कार्यक्रमले स्केचहरू, चित्रणहरू र ग्राफिक्सहरूसँग काम गर्नका लागि समान उपकरणहरू समावेश गर्दछ।
Inkscape सँग स्क्रिन पिक्सेल, बिटम्याप ट्रेसिङ उपकरणहरू, साथै रङहरू र ढाँचाहरूसँग वस्तुहरू चित्रण गर्ने क्षमताहरूद्वारा वस्तुहरू सार्नको लागि समान कुञ्जीहरू छन्। सफा र सहज इन्टरफेसको साथ शक्तिशाली उपकरणहरूको संयोजनले यस भेक्टर ग्राफिक्स सफ्टवेयरलाई अर्ध-प्रो र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ।
को बारेमा थप जान्नुहोस् उत्तम नि: शुल्क ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेयर।
धेरै फाइल ढाँचाहरूसँग काम गर्दछ
तपाईको ब्राउजरको लागि उत्कृष्ट विस्तार
विशेषता किबोर्ड सर्टकटहरू
सम्भावित उपायहरू खोज्नुको सट्टा कसरी Adobe Illustrator नि:शुल्क प्राप्त गर्ने, तपाईले राम्रोसँग Boxy SVG प्रयोग गर्नुहुनेछ, एक स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक जुन गुगल क्रोममा विस्तारको रूपमा चल्छ। यसले कलम, पाठ, बेजियर कर्भहरू र आधारभूत SVG आकारहरू सहित भेक्टर ग्राफिक्ससँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न उपकरणहरूको एर्रे समावेश गर्दछ।
Boxy SVG सँग Adobe Illustrator जस्तै सफा र सीधा इन्टरफेस छ। साथै, यसले १००+ आदेशहरूको लागि अनुकूलन योग्य किबोर्ड सर्टकटहरू प्रदान गर्दछ। साधारण SVG वा SVGZ फाइलहरू बाहेक, JPG वा PNG ढाँचाहरूसँग काम गर्न सम्भव छ, जुन धेरै उपयोगी छ।
शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त
डिजाइनको ठूलो पुस्तकालय
लुकेका भुक्तान कार्यहरू छैनन्
अनुकूलनका लागि धेरै विकल्पहरू
उन्नत सुविधाहरू समावेश गर्दैन
Vecteezy Editor एक सुविधा सम्पन्न र प्रयोगकर्ता-अनुकूल अनलाइन भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक हो। यसले 800+ फन्ट र 25,000+ डिजाइन वस्तुहरू पूर्व-स्थापित गरेको छ। Vecteezy Editor एक पूर्ण रूपमा अनुकूलन योग्य उपकरण हो जसले तपाईंलाई आवश्यक प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न मात्र होइन SVG मा तपाईंको आफ्नै परियोजनाहरू अपलोड र सम्पादन गर्न अनुमति दिन्छ, JPEG, PNG फाइल ढाँचाहरू।
Vecteezy Editor एक सहज इन्टरफेसको साथ राम्रोसँग डिजाइन गरिएको भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक हो जसले यसलाई शुरुआतीहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
न्यूनतम र उपयोगी प्रयोगकर्ता इन्टरफेस
धेरै पृष्ठहरूसँग काम गर्न सजिलो
सुविधाजनक निर्यात विकल्प
निरन्तर सुधार भइरहेको छ
कहिलेकाहीँ ढिलो हुन सक्छ
Gravit ले तपाईंले अपेक्षा गर्न सक्नुहुने सबै आधारभूत भेक्टर-सम्पादन उपकरणहरू समावेश गर्दछ, जसमा पेन, बेजिगन, लाइन, स्लाइस, नाइफ, ग्रेडियन्ट सम्पादक, इत्यादि समावेश छ। यसमा उन्नत सुविधाहरूको एर्रे पनि छ, उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ समर्थन, बुलियन अपरेशनहरू, प्रतीकहरू, आदि
यसबाहेक, Gravit एक सहज इन्टरफेस छ र भिडियो ट्यूटोरियलहरूसँग आउँछ। यो वेब-आधारित भेक्टर ग्राफिक्स सम्पादक भएकोले, यसले तपाईंलाई आफ्नो परियोजनाहरूमा जहाँसुकै काम गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईलाई मात्र इन्टरनेट जडान चाहिन्छ। थप रूपमा, विभिन्न ढाँचाका फाइलहरू आयात र निर्यात गर्न सम्भव छ, जसले Gravit लाई अतिरिक्त बिन्दु दिन्छ यदि तपाईंले यसको कार्यक्षमता Adobe Illustrator CS5 नि:शुल्क डाउनलोडसँग तुलना गर्नुभयो भने।
थप पत्ता लगाउनुहोस् Adobe Illustrator विकल्पहरू ।
Adobe Illustrator मा पूर्व-स्थापित फन्टहरूको ठूलो संख्या छ। जे होस्, तपाइँ तपाइँको कार्यहरु लाई एक अद्वितीय स्पर्श दिन को लागी तपाइँको संग्रह को विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यी नि:शुल्कहरू प्रयोग गरेर आफ्नो रचनात्मकताको सम्भावना अन्वेषण गर्नुहोस्।
नि: शुल्क फन्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
यो पहिलो-कक्षा फन्ट प्रयोग गरेर आफ्नो परियोजना विस्तार गर्नुहोस्। यो सीधा, कट-अफ किनाराहरू भएको क्लासिक फन्ट हो। यसलाई आफ्नो काम पप बनाउन विभिन्न प्रकारका तस्बिरहरू र डिजाइनहरूमा लागू गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
जाँच गर्नुहोस् निःशुल्क Illustrator ब्रशहरू ।
सार्वभौमिक र सुरुचिपूर्ण हुनाले, यो फन्टले तपाईका सबै रचनात्मक लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। अचम्मको घुमाउरो लामो रेखाहरू प्रस्तुत गर्दै, यो फन्ट ती राम्रा पुराना दिनहरूको वास्तविक हस्तलेखनसँग मिल्दोजुल्दो छ।
यी मार्फत हेर्नुहोस् नि:शुल्क Adobe Illustrator आइकनहरू ।
यो सबैभन्दा असाधारण फन्टहरू मध्ये एक हो जुन दुवै डिजाइनर र फोटोग्राफरहरू बीच खोजी गरिन्छ। यो क्यालिग्राफिक र रचनात्मक हस्तलेखन बीचको उत्कृष्ट मिश्रण हो।
जाँच गर्नुहोस् नि:शुल्क Illustrator बनावट ।
डाउनलोड गर्नुहोस् Adobe Illustrator CS5 नि:शुल्क
डाउनलोड गर्नुहोस् Adobe Illustrator Mac/Win को लागि नि:शुल्क
आधिकारिक वेबसाइटबाट Adobe Illustrator को इजाजतपत्र प्राप्त संस्करण नि:शुल्क डाउनलोड गर्न माथिको लिङ्क पछ्याउनुहोस्। तपाईले सशुल्क संस्करणको सबै समान क्षमताहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, केवल फरक यो हो कि तपाईले यसलाई सात दिनको लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।